Moments Neshamwari 45
Chii Chinodiwa Kuti Ukure Mukuzvipira?
Kufunga nzira yekubatira iyo yakazvipira, uye kuishandira.
Kuzvipira inzvimbo kana chimiro chepfungwa kune icho musimboti, chikonzero, kuva kana munhu, uye kugadzirira kuita chimwe chinzvimbo kune icho chakazvipira. Kukura mukuzvipira kunoenderana nekugona kwemumwe wekuita, kushumirwa, uye huwandu hunowedzerwa nekuita nehungwaru. Chimiro chekunamata chinomanikidza munhu kuratidza kuzvipira kwake nekuita chimwe chinhu chinoratidza kuzvipira kwake. Uku kumanikidza kwekuzvipira hakuwanzo kuburitsa mibairo yakanaka, zvakadaro, asi chinangwa chiri chakanakisa, izvo zvinoitwa zvinogona kuve zvinokanganisa izvo zvazvakaitirwa.
Zvipenga zveVamwari zvinoita sekubva pamoyo. Ichi chiito chinobva pamoyo, kunyangwe chiri iko kutanga kwakakodzera, hazvina kukwana pakukura chaiko. Zivo inodiwa kuita nekuchenjera chiito. Iye murume ane mweya wekuzvipira kazhinji haateereri kuti ataure asati aita, asi anosarudza kutevedzera izvo zvinodzidziswa nemoyo wake. Asi, chete kuburikidza nekushandiswa kwepfungwa kunogona kuwanikwa zivo. Muedzo wechokwadi wekuzvipira kweumwe munhu kudzidza, kufunga, kushanda pfungwa nezve zvakanakira izvo zvaakazvipira kwaari. Kana mumwe akawira kumashure kuita chiitiko uye akatadza kufunga nokushivirira uye nekuramba, ipapo haana kuzvipira kwechokwadi. Kana munhu aine mweya wekuzvipira akaramba achishandisa pfungwa dzake uye akawana simba rekufunga zvakajeka, anowedzera ruzivo kuzvipira kwake uye kugona kwake kushandira icho icho chaakazvipira kuchawedzera.
Chii chinonzi chimiro cheMavara, uye Yakatora Kubvumidza?
Hunhu hwezvinonhuwirira ndewenyika. Pasi, sechimwe chezvinhu zvina, inoenderana nepfungwa yekunhuhwirira. Zvinonhuhwirira musanganiswa unonhuwirira wehonam, zvinonhuwira, oiri, marimu, huni iyo painopisa inopa kunhuhwirira kwakanaka kubva kumafuta ayo.
Kufukidza kwakange kuri kushandiswa munhu asati atanga kunyora masangano, tsika, uye zviitiko. Mavhesi mazhinji anotaura nezve rusenzi sezviri madikanwa mukuita kwekunamata. Zvinonhuwira zvaishandiswa muzvibayiro uye sechipiriso, chiratidzo chekuzvipira neanonamata uye kune iye akanamata, kune icho chainamatwa. Mumagwaro mazhinji kupira kwechinonhuwira sechiitiko chekunamatira kunotsanangurwa pakureba, nemirairo yakapihwa kuti yemhando yezvinonhuwira ishandiswe, kugadzirira kwayo uye kupisa.
Pane Chero Rubatsiro Kubva kuKupisa kweChero, Munguva Yokufungisisa?
Zvakanakira zvinogona kuitirwa kubva pakupisa rusenzi panguva yekufungisisa, zvine chekuita nezvepanyama nepaserese yepasi. Kupisa zvinonhuwira hakuzosviki kupfuura kune nyika yeastral kana psychic. Kupisa zvinonhuwira hakuzobatsiri kufungisisa pane zvidzidzo zvine chekuita nepfungwa kana zvemweya zvepanyika.
Kana munhu akapa kuzvipira kumweya mukuru wepasi uye nemweya yepasi, kana chero chipi zvacho chisikwa chenyeredzi yepanyika, ipapo anogona kuwana pundutso kubva pakupiswa kwerusenzi. Iye anogashira mabhenefiti ezvakabatsirwa zvinopihwa. Pasi rinopa zvekudya zvinovaka muviri wemunhu. Zvinyorwa zvacho zvakare zvinopa simba zvisikwa zvepasi nezvisikwa zvepasirese yenyika. Kupisa zvinonhuwira kunobatsira chinangwa chekaviri. Iyo inokwezva uye inovaka kutaurirana pamwe nezvisikwa zvinoda, uye inodzinga zvimwe zvisikwa izvo iyo rusenzi isina kubviswa. Kana munhu achishuva kuvapo kwehumwe hunhu, ipapo kupisa rusenzi kunogona kubatsira mukukwevera hunhu uhu uye kutanga rapport. Nekudaro, kana munhu asingazive chimiro chekupisa izvo chaaizoshandisa uye asingazive chimiro cherudzi rwe pesvedzero kana kuva iye chaanoda, anogona kuwana panzvimbo yekubatsirwa, chii chisingadiwe uye chinokuvadza. Izvi zvinoshanda mukufungisisa nezvepanyama uye zvezvemanyepo kana zvepfungwa zvepasi, uye nezvinhu zvinonakidza.
Kune kufungisisa kwakadzama pazvidzidzo zvepanyika nepamweya, kupisa rusenzi hakufanirwe. Yedu yega kufunga nemafungiro epfungwa anosarudza kuti zvipi zvinopesvedzera zvichave zvakakomberedza uye ndezvipi zvinorarama mukufungisisa kwepfungwa uye pamweya. Kupisa zvinonhuwira kazhinji kunobata pfungwa kuzvinhu zvinovaka uye kunodzivirira kuti isapinda mumamiriro ezvinhu ekubvisira anodiwa pakufungisisa pamusoro penyika nepfungwa.
Mhedzisiro yekupisa zvinonhuwira inoonekwa pane chero hurongwa here?
Vari. Zvichienderana nesimba remuridzi ruzivo rwaanarwo rwechidzidzo chake, zvinoonekwa uye zvimwe zvinokonzeresa zvinozoonekwa. Utsi uye utsi zvinobuda kubva mune zvinonhuwira zvinopa simba uye muviri wezvinhu izvo zvisikwa zvainoda uye zvakaburitswa zvinogona kuoneka. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei varoyi uye necromancers vakashandisa rusenzi mukunyengerera kwavo uye mukudyidzana. Nekutsva kwezvinonhuwira zvinogadzirwa pane mamwe mariza kupfuura epanyama, asi munhu anofanira kunge ane pfungwa dzake dzepfungwa dzakadzidziswa uye dziri pasi pesimba repfungwa dzake kuti azvione izvi. Ipapo achaona kuti sei uye azive chikonzero nei pesvedzero nezvisikwa zvichikwezva kana kudzorwa nekupisa zvinonhuwira, mabatiro azvainoita iye iye achipa zvinonhuwira, uye zvimwe zvinopinda kupisa rusenzi.